Dooddii Bulshada Rayidka Ah, Wasiirka Iyo Guddiga Miisaaniyadda Golaha Shacabka Ee Miisaaniyadda 2018-ka – Goobjoog News
Wafdi Ka Socda Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya Oo Ku Sugan Hirshabeele Muxuu Yahay Qorshahooda
Wasaaradda Caafimaadka Oo Hey’adaha Caalamiga Ku Wargelisay In Shirarka Laga Wareejiyo Nairobi
Dowladda Jarmalka Oo joojisay Mashruuc Garowe Loogu Dhisi Lahaa Isbitaal Weyn
Askari Ka Tirsan Booliiska Oo Lagu Xukumay Dil Toogasho ah
Madaxweyne Deni“Puntland Iyada Ayaa Dhisanaysa Garoomadeeda Kubbadda Cagta”
Xisbiga Qaran Ee UPD Oo Ka Hadlay Xiisadda Galmudug, Doorashada Jubbaland iyo Khilaafka DF iyo Dowlad Goboleedyada
Madaxweyne Farmaajo Oo Maanta Ka Qeybgalaya Caleema Saarka Dhiggiisa K/Africa
Dooddii Bulshada Rayidka Ah, Wasiirka Iyo Guddiga Miisaaniyadda Golaha Shacabka Ee Miisaaniyadda 2018-ka
Shalay waxaa Muqdisho lagu qabtay dood ku saabsan dhageysiga dadweynaha ee miisaaniyadda 2018-ka, kulanka uu goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle, waxaa sidoo kale xog ururin sameynayey guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda ee golaha shacabka.
Ugu horeyntii wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in miisaaniyadda cusub ee 2018-ka lagu jaan-joogay maxaa dowladda soo gala isaga oo intaa raaciyay in sanadkan 2018-ka uu kor u kac ku yimid dakhliga gudaha iyo arrimo kale, isla markaana ay kor u qaadeen miisaaniyadda sanadka soo socda.
Wasiirka waxaa uu qabaa in meel fiican isla gaareen dowlada iyo hey’adaha lacaga iyaga oo laga doonayo arrimo ay ka mid yihiin Cabshuur ma qaadaan, haddii aan la qaadin, maxaa canshuurta loo qaadi-waayey? Lacagta lagu bixiyo mashariicda maku baxdaa meelihii loogu talo-galay? Qofka shaqeeyo mushaar mala siiyaa? Ma jiraan dad aan shaqeyn oo mushaar qaata, dadka aan shaqeynin mala xisaabtamaa? Ma heysaan tirada saxda ee dowladda u shaqeysa shaqaale rayid iyo ciidan.
Inkasta uu wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle baxay markii uu khudbadda dhameeyay inta aan su’aalo la weydiin balse waxaa kulanka sii waday guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda ee golaha shacabka.
Illaa 10 qof oo u hadashay ururada shaqaalaha waxaa ay xoogga saareen cabasho ay ka qabaan isbaarada tirada badan oo goobaha yaallo, canshuuraha laga qaado, lacagta lagu soo rogay dadka dhoofaya.
Mid ka mid ah ururka shaqaalaha waxaa uu u dooday xoogsatada dekadda iyo in aanay xuquuq ka helin canshuurta laga qaado dowladda.
Ururada Ganacsatada oo iyagana ka mid ahaa dadkii miisaaniyadda ka hadlay aya sheegay in ay ku dhib qabaan canshuuraha looga qaado dekadda Xamar, iyaga oo sheegay in horay dekadda uga soo degi jireen 7000 oo Konteenar hadana ay ka soo dagaan illaa 3000, taasina ay ugu wacan tahay lacagta la canshuuro oo xad dhaaf ah.
Ganacsatada waxaa ay dowladda iyo gobolka Banaadir ku eedeeyeen in ay ka baxeen ballan lagu galay dhismaha waddooyinka gobolka Banaadir oo ahaa sidan: Wasaaradda Maaliyadda: 25%, Maamulka Banaadir: 25% iyo ganacsatada gobolka Banaadir oo 50% ah.
Mid ka mid ah ganacsatada aya wasaaradda maaliyadda weydiiyay inta dowladda aaney ka hadlin waajibaad, aaway xuquuqdii dadka, canshuurta umadda laga qaado mala helayaa statementigeeda, mala baari karaa? Boono rasmi ah mala jaraa, daah-fur ma leedahay, sidoo kale ma jiraa isla xisaabtan ku aadan ammaanka iyo sida badeecada aad canshuurta ka qaaday tagi karaan meelihii loogu talagalay.
Baydhabo: Xildhibaan Loogu Doortay Golaha Shacabka Isaga Oo Aan La Hareer Fadhin
Faah Faahin Laga Helayo Diyaarado Dagaal Oo Duqeyn Ka Geystay Sh/hoose
Dhageyso Barnaamij wareedka subaxnimo Goobjoog Fm oo qodobo muhiim ah lagu soo qaatay
Kaydka Goobjoog Select Month May 2019 (177) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
Bursa göz doktoru randevu
If you want to take a good deal from this paragrph then you...
Physical exercise for leisure activities, sports, and fitnes...